Semalt: Fahalalana momba ny hosoka amin'ny Internet sy Internet
Ny ordinatera dia manome làlana ho an'ny mpampiasa cyber mba hanafika ny ankamaroan'ny tranonkala. Ny ankamaroan'ny vohikala e-commerce sy tetikady an-tserasera dia misy zavatra toy ny fampivoarana ny tranokala sy ny Search Engine Optimization (SEO). Ny fisainan'ny hackers manafintohina sy mangalatra fanazavana sarobidy dia tsy misarika ny saintsika. Noho izany, ny ankamaroan'ny tranonkala e-commerce, ary koa ny bilaogy sasany, dia iharan'ny hackers. Ny trangam-pifamoivoizana an-tserasera toy ny fangalarana ny maha-olona, ​​ny olana ara-bola amin'ny banky ary ny fanadiovana vola dia mitranga amin'ny fanamorana ny fantsom-panafody sy ny teknolojia hacking - ltc company ratings.
Ny hosoka amin'ny ordinatera dia manana lalàna ao amin'ny vondim-panjakana, izay mifehy ny fampiasana ordinatera sy Internet ho loharano. Ny tranganà hosoka amin'ny aterineto dia manana lalàna mifehy azy ireo, ary ireo mpifanolobodirindrina dia afaka miatrika sazy noho ny asa tsy ara-dalàna rehetra ao amin'ny tranonkala. Ny lalàna momba ny hosoka sy ny fampijaliana (CFAA) dia mamela ny hosoka amin'ny aterineto ho toy ny fanomezan-dalana feno habibiana amin'ny rafitry ny ordinatera na mihoatra ny fanomezan-dàlana, izay ampiasain'ny mpampiasa na ny rafitra web. Ireo toe-javatra ireo dia manondro solosaina toy ny PC, izay misy fiantraikany amin'ny baiko iraisam-pirenena na vahiny.
Lisa Mitchell, Semalt Mpitarika Success Successor, dia manolotra ny sasany amin'ireo fanodikodinam-pihetseham-batana amin'ny hetsika:
Ireo pejinay malaza Nizeriana. Azonao atao ny mahita ireo mailaka ara-dalàna avy amin'ny mpanan-karena "Printsy Nizeriana". Ny ankamaroan'ireo mpitsikera marobe ireo dia mandresy lahatra fa manana vola be any ho any izy ireo fa mila vola madinika ahafahana miditra aminy. Amin'ny fampanantenana am-pihetseham-po amam-pihetseham-po, dia manasitrana anao izy ireo amin'ny fanomezana vola, ary izany dia ny faran'ny tantara. Ny fanenjehana ireo hosoka aterineto nandritra ny 18 taona..Andininy faha-1028.Ny hosoka sy ny asa mifandraika amin'ny fampifandraisana amin'ny taratasy fanamarinana, ny fahazoan-dàlana ary ny fampahafantarana.
Ny fahazoana fidirana amin'ny vaovao avy amin'ny solosaina iray tsy misy fankatoavana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fangalarana ny maha-olona dia manomboka amin'ny fomba fametrahana eo an-toerana. Ny hackers dia afaka mampiasa io fomba io hanangonana karatra maha-olona maro, SSNs ary antontan-taratasy manan-danja hafa toy ny fahazoan-dàlana mitondra fiara.
Ireo mpanjifa mitsambikina amin'ny mailaka. Ny mailaka misy spam dia manana antony ao ambadiky ny phishing ary koa ny fampiasana virosy mba hahatongavana any amin'ny solosaina iray. Ohatra, ny olona iray dia mety ahitana ny trosan'ny serasera amin'ny mailaka, izay afaka manatanteraka ny andraikitra sasantsasany
Mandefa programa malware na fandaharana tsy mety, izay afaka manatanteraka famonoana amin'ny PC. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia misy fomba maro samihafa no atahoran'ireo virosy ireo ny solosaina iray. Ny tanjon'ny ankamaroan'ny hacks dia tsy mazava. Ny lalàna momba ny hosoka sy ny fampijaliana (CFAA) momba ny kaompy dia manazava ireo fihetsika ireo ho toy ny hosoka amin'ny aterineto ary mety hanameloka olona iray araka ny U.S.C 17. § 506 Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona - Ny heloka bevava heloka.
Ny varotra e-varotra na ny fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto dia mety ho tratran'ny hosoka amin'ny aterineto. Ny tompon'ny tranonkala E-commerce dia mandany vola be ho an'ny mpangalatra izay miparitaka amin'ny tranonkala maro ary maka fanazavana sarobidy. Miaraka amin'ireo trangan-javatra momba ny fangalarana, misy tranga marobe amin'ny hosoka amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Ny fitaovana izay mampiasa fitaovam-piadiana hanakanana ny ankamaroan'ny tranonkala dia mihatsara kokoa hatrany rehefa mandroso ny taona. Ny tranga sasantsasany amin'ny hosoka amin'ny aterineto sy ny fomba mety hanitsiana azy ireo dia amin'ity torolàlana ity. Azonao atao ny mianatra fomba isan-karazany amin'ny fomba fiasa mikasika ny hosoka sy ny fampijaliana (CFAA) momba ny heloka bevava (CFAA) momba ny heloka bevava cyber toy ny hackers sy ny fomba hamahana ny sasany amin'ireny tranga ireny.